The Ab Presents Nepal » भारतीय तरकारीमा भेटियो ८३ प्रतिशतसम्म विषादी, हेर्नाेस प्रमाण र दबाब सोरुप एक सेयर गर्नु होस् !
भारतीय तरकारीमा भेटियो ८३ प्रतिशतसम्म विषादी, हेर्नाेस प्रमाण र दबाब सोरुप एक सेयर गर्नु होस् !
काठमाडौं, असार २१ भारतबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण सुरु गरेर वाहवाही पाएको सरकार स्थगनपछि निकै आलोचित बनेको छ ।
सरकारको निर्णयलाई वाहावाही गरेका नागरिकले फिर्तासँगै जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरी भारतसामु झुकेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन ।
‘भन्सारमा बिषादी परीक्षणको निर्णय सही हो, तर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कुनै पुर्वाधार छैन, त्यही भएर केही समयका लागि स्थगन भएको हो,’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकृत भन्छन । सरकारी दवाी जे भएपनि नागरिक भने यो बिषयमा आक्रोशित नै छन । बिना तयारी हचुवाको भरमा जनता भडकाउने निर्णयका रुपमा यसलाई लिनुपर्ने सत्तारुढ दलकै नेता कार्यकर्ता बताउँछन ।
बजारमा आउने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको वेभसाइटमा राखिएको परिणामले सवैको मुटु घोचिरहेको छ ।